Waxaan idinku soo dhawaynaynaa adiga iyo qoyskaaga barnaamijka Missouri WIC. Fadlan na soo wac haddii aad wax su'aalo ah qabtid adigoo garaacaya: 573-751-6204 ama (lacag la'aan) 800-392-8209. Waxaad sidoo kale e-mayl u soo diri kartaa Missouri WIC halkan - WICinfo@health.mo.gov.
Ma haysaa wax su'aalo ah ama waxaad dhibaato ku qabtaa isticmaalka WICShopper app? Email JPMA at WICShopper@jpma.com
Ma ku cusub tahay WIC? Fadlan fiirso Missouri Ku soo dhowow WIC video hoose!
Ku soo dhawoow Missouri Fiidiyowga WIC
eWIC waa soo socota!
Dhammaan wakaaladaha WIC waxay ka gudbi doonaan bixinta jeegagga una adeegsadaan wareejinta gargaarka elektiroonigga ah (EBT) si loo gaarsiiyo dheefaha cuntada WIC. U gudbida EBT, oo loo yaqaan eWIC, waxay abuuri doontaa khibrad adeegsi oo sahlan. Qoysaska WIC waxay awoodi doonaan inay iibsadaan alaabada safarada badan ee dukaanka intii ay iibsan lahaayeen wax walba hal mar inta lagu jiro bisha.
Waxaanu cusbooneysiin doonnaa macluumaadkaan sida hababka eWIC. Kusoo hubi halkan updates!
Talooyinka iyo FAQ
Isticmaal "Soo hel xafiiska WIC"Badhanka barnaamijka WICShopper. Waxaad ka heli kartaa tilmaamo kiliinikadaada oo aad uga waci kartaa app.
Raadi “Missouri WIC Raahiyaha IdmanCalaamad.
Ka eeg alaabooyinka ku jira barnaamijka WICShopper si aad u hubiso inay u qalmaan Missouri WIC-u-qalma. Xusuusnow inaad hubiso inaad runtii haysato cuntooyinka ku qoran jeegaaga kahor intaadan iibsan sheyga!
U Adeegso Liistada Cuntada Wanaagsan ee WIC ee Missouri (AFL) ee WICShopper (ama nooca aad daabacan tahay) si aad u aragto cuntooyinka WIC ee aad iibsan karto.
Q: Waxaan iska indho tirayaa cuntooyinka qaarkood ama waxaan galay nambarka UPC oo waxaan arkay farriimo kala duwan Maxay ula jeedaan?
Oggol - Shayga waxaa loo oggol yahay Missouri WIC! Hal shay oo ay tahay inaad ogaato waa inaad arki kartaa shay la oggol yahay, laakiin maaha qayb ka mid ah dheefahaaga cuntada ee WIC, sidaa daraadeed kuma iibsan kartid WIC. Tusaale ahaan, cunugga hal sano jira wuxuu helaa caano dhan. Haddii aadan qoyskaaga ku lahayn cunug hal sano jir ah, caanaha oo dhan qayb kama noqon doonaan gargaaradaada cuntada ee WIC, mana awoodi doontid inaad iibsatid caano dhan diiwaanka. Ilaa dheefaha WIC ay ku xirnaadaan barnaamijka WICShopper, farriintan "la oggol yahay" looma adeegsan karo gargaarada qoyskaaga.
Ma aha wax WIC ah - Tani macnaheedu waa Missouri WIC ma aysan ansixin shaygan. Haddii aad u maleyneyso inaad ku iibsan karto cunnadan faa'iidooyinka cuntada ee WIC, noo soo sheeg adigoo adeegsanaya “Tani ma iibsan karto!"Button ee app this.
A: "Tani ma iibsan karto!"Waxay kuu oggolaanaysaa inaad u sheegto WIC marka sheyga cuntada aad isku dayeyso inaad iibsato waxaa diidaya diiwaanka. Markaad isticmaasho, "Tani ma iibsan karto!”Ee barnaamijka WICShopper, wakaaladda gobolka WIC waxay heli doontaa ogeysiin. Hay'adda WIC ee gobolka ayaa dib u eegi doonta dhammaan waxyaabaha la soo gudbiyey oo waxay ka shaqeyn doontaa bakhaarradu si ay cuntooyinka kuu oggol yihiin kuu heli karaan!
Liiska Cuntada WIC ee Missouri
Dhammaan macluumaadka kujira qaybta Caafimaadka iyo websaydhka Adeegga Waayeel waxaa loogu talagalay ujeedooyin waxbarasho oo keliya loomana isticmaali doono ogaanshaha ama daweynta. Macluumaadka waxaa loo bixiyay si loo sii fahmo nafaqada WIC iyo arrimaha la xiriira. Isticmaalayaashu waa inaysan waligood iska indhatirin talooyinka caafimaadka ama dib u dhaca ku raadsadaan sababta oo ah waxa ay ku arkeen barta websaydhkan. Khabiirada nafaqada, dhakhaatiirta, iyo xirfadleyda kale ee daryeelka caafimaadka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay la tashadaan ilo kale oo ay xaqiijiyaan macluumaadka ku jira bartan. Tixraacyada hay'ad kasta oo aan dawli ahayn, wax soo saar, adeeg, ama isha macluumaad ee laga yaabo inay ku jirto degelkan looma tixgelin doono oggolaansho, ha ahaato mid toos ah ama si toos ah, Waaxda Adeegyada Caafimaadka ee Missouri iyo Adeegyada Waayeelka. Intaa waxaa sii dheer, Waaxdu mas'uul kama noqon karto mas'uuliyadda macluumaadka ku jira bogag kale oo websaydhkeeda lala xiriiri karo. Haddii wax xun oo macluumaad ah laga helo goobahan, waxaan uga mahadcelineynaa ogeysiinta degdegga ah email.
Sinaan la'aan (Ingiriis)
Si aad u fayl garaysato cabasho barnaamij takooris ah, buuxi Foomka Cabashada Takoorka Barnaamijka USDA, (AD-3027) laga helay khadka tooska ah ee internetka: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, iyo xafiis kasta oo USDA ah, ama warqad u qor USDA oo ku qor warqadda dhammaan macluumaadka lagu codsaday foomka. Si aad u codsatid nuqul ka mid ah foomka cabashada, wac (866) 632-9992. U soo gudbi foomkaaga ama waraaqdaada oo dhammeystiran USDA adoo:
Fakis: (202) 690-7442; ama
Sinaan la'aan (Isbaanish)
Laga soo bilaabo barnaamijyada asaasiga ah ee FNS, si aad u taageersan tahay, degenaansho la'aanta, dib u habeyn ku samee ficil siyaado ah Aviso de No Discriminación:
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del barnaamijka ) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programma se puede proporcionar en otros idiomas.
Para soo bandhigida iyo ku takrifalka, si aad u dhamaystirto Foomka Nidaamka Diiwaangelinta, (AD-3027) Que está lánea en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. waa in aad ka mid noqotaa USDA, si aad u ogaatid inaad u diri doonto USD USD iyo in aad la socoto si aad ula socoto. Para qadarin si aad u kala hor mariso, laame al (866) 632-9992. Haga waxaad ka heleysaa foomka leyno o qiyaasta USDA por:
correo: Waaxda Beeraha Mareykanka
fakis: (202) 690-7442;
Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Waayeelka ee Missouri (MDHSS) Cabashada Takoorka